कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ३१ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ३१ गते)
काठमाडौँ ०७७ वैशाख ३१ गते
नेपालमा वैशाख ३१ गते थप २६ जनामा जनामा कोरोना पुष्टी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार रुपन्देहीमा १२, कपिलवस्तुमा नौ, पर्सामा तीन, बाँके र नवलपरासी पश्चिममा एक/एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । योसँगै नेपालमा २ सय ४३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टी भएको हो । त्यसमध्ये ३५ जना उपचारपछि घरफर्किएका छन् ।
सरकारले जेठ १ गतेदेखि देशभरको आवातजावत थप कडाइ गर्ने भएको छ । बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ आउन अब जिल्ला प्रशासनको अनुमतिले मात्रै पाइने छैन । यसको निम्ति गृह मन्त्रालयबाटै छुट्टै पास लिनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सवारीसाधन काठमाडौँ उपत्यका छिर्न पाउने छैनन् । पासको निवेदन दिँदा आउजाउ गर्नुको प्रयोजन र कारण पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । गत तीन दिनमा लगातार कोरोना सङ्क्रमित बढेपछि गृह मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको हो । गृहमन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीका अनुसार जेठ १ गतेदेखि यसअघि दिइएका सवारी पास खारेज गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख ३१ गतेदेखि पत्रकारलाई मन्त्रालय प्रवेशमा अत्यधिक कडाइ गरेको छ । यसअघि दिनहुँजसो समाचार सङ्कलनका लागि परिचय पत्र देखाएर प्रवेश गर्ने गरेका पत्रकारलाई सुरक्षाकर्मीले गेटमा रोकेका छन् । मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम विष्टले कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै भेटघाटमा कडाइ गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।
प्रदेश १ मा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट ११ हजार १ सय १३ जनाको परीक्षण गरिएको छ । वैशाख ३१ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ७ सय २३ जना महिला र १ हजार ७ सय १६ जना पुरुष गरी २ हजार ४ सय ३९ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख ३१ गते ९० जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । स्वाब सङ्कलन गरिएका मध्ये ७ सय २१ जना महिला र १ हजार ६ सय ९४ जना पुरूष गरी २ हजार ४ सय १५ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । वैशाख ३१ गते स्वाब सङ्कलन गरिएका १ सय १० जनाको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश १ मा आरडीटी विधिबाट ८ हजार ६ सय ७४ जनाको परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकोमा २५ जनाको आरडीटी पोजेटिभ आएको छ । १ हजार ६ सय ६२ जना महिला र ६ हजार ९ सय ८७ जना पुरुष गरी ८ हजार ६ सय ४९ जनाको आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । वैशाख ३१ गते मात्र ३ सय ५४ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । प्रदेश १ मा ५ हजार ७ सय ७७ बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । १७ ओटा क्वारेन्टाइन बेड घटाइएको छ । क्वारेन्टाइनमा १ सय ४० जना महिला र ५ सय २ जना पुरुष गरी ६ सय ४२ जना रहेका छन् । होमक्वारेन्टाइनमा १ हजार ६ सय २८ जना महिला र ६ हजार ५ सय ८२ जना पुरुष गरी ८ हजार २ सय १० जना रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको फुड बैङ्कमा वैशाख ३१ गतेसम्म ३ लाख ६७ हजार ४ सय २५ केजी चामल सङ्कलन भएको छ । २६ हजार ४ सय ५० केजी दाल, २९ हजार ५ सय ३५ केजी नुन सङ्कलन भएको नगरस्तरीय कोरोना राहत परिचालन समितिले वैशाख ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश २ मा वैशाख ३१ गतेसम्म ९५ जना व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टी भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । वैशाख ३० गतेको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा पर्सा जिल्लामा ३९, बारा जिल्लामा एक जना गरी ४० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको र वैशाख ३१ गते थप २३ जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । जसमध्ये पर्सा जिल्लामा १८, धनुषा जिल्लामा दुई, महोत्तरी जिल्लामा दुई र सर्लाही जिल्लामा एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको वैशाख ३१ गते गरिएको मिडिया ब्रिफिङमा उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेशमा कोरोना सङक्रमितको सङख्यामा वृद्धि भएपछि प्रदेश सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा वैशाख ३१ गते सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने, सीमा नाकामा आवतजावतलाई निरुत्साहित गर्न प्रचार प्रसारलाई तिब्र बनाउने सहितको निर्णय गरेको छ । बैठकले सीमा पारी छिमेकी राष्ट्र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई दिन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गर्ने र उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्थाका लागि प्रत्येक जिल्लामा थप ३÷३ सय क्षमताको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवले बताउनु भयो ।
प्रदेश २ मा वैशाख ३१ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ४ हजार २ सय ३६ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । जसमा ३ हजार २ सय ४० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने ९५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । ९ सय १ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी, वैशाख ३१ गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण ५ हजार ४ सय ८८ जनाको गरिएकोमा ५ हजार ४ सय ७८ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएको ४ हजार १ सय ५८ बेड क्षमताको १ सय ७९ ओटा क्वारेन्टाइनमा १ हजार ६ सय १२ जना व्यक्तिलाई राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेश भरिमा हालसम्म ४ हजार ५ सय २० जना व्यक्तिहरू होमक्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने ३ सय ४७ बेड क्षमताको आइसोलेशनमा ८४ जना उपचारार्थ छन् ।
काठमाडौँको चन्द्रागिरी नपा–९ मच्छेगाउँमा वैशाख ३० गते पुष्टी भएकी कोरोना सङ्क्रमित महिला वैशाख २९ गते महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको छ । ३३ वर्षीया ती महिला निजी सवारी साधनमा  आएकी खुलेको हो । पछिल्लो दुई पटकको परीक्षणमा कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएपछि वैशाख ३१ गते चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी ६३ वर्षीया महिलालाई भरतपुर अस्पतालले घर पठाएको छ । सङ्क्रमण देखिएपछि चौथो पटकसम्मको परीक्षणमा लगातार कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएकी महिलामा तीन हप्तापछि गरिएको दुई ओटा परीक्षणमा कोरोना नदेखिएपछि अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो ।
ललितपुरस्थित निदान अस्पताल परिसरमा रहेको आरोग्य फाउण्डेशनमा कार्यरत प्रशासनका कर्मचारीमध्ये भक्तपुर घर भएकी एक जनामा कोभिड–१९ को पुष्टी भएको छ । उनी वैशाख ९ गते सुनसरी जिल्लाको इटहरी गएको र वैशाख २९ गते भक्तपुर फर्किएको जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।
भक्तपुरमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टी भएका एक २७ वर्षीय पुरुष सशस्त्र प्रहरी र २५ वर्षीया महिला एक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ । उपत्यका बाहिर रहेका उनीहरु लकडाउनका बेला काभ्रे र भक्तपुरको सिमाना साँगा पार गर्दै भक्तपुर आएका थिए । कोरोना सङ्क्रमित महिला बसेको शङ्खधर चोकस्थित बस्तीमा वैशाख ३१ गते प्रहरीले ‘सिल’ गरेको छ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भीमानको कोरुङखोलाका पाँच घर सिल गरिएको छ । भक्तपुरमा वैशाख ३० गते कोरोना सङ्क्रमण भेटिएकी महिलाका आफन्त र त्यसको आसपासको घर स्थानीय प्रशासनले सिल गरेको हो ।
वैशाख ३१ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा कुल ७ सय ५७ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ भने ७ सय २७ जनाको परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । २८ जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा वैशाख ३१ गते सम्म कुल ६ हजार ७ सय १६ जनाको ¥यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
एक हप्ताका लागि बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका सिल गरिएको छ । गलकोट नगरपालिकाबाट घर गएका पर्साका १४ जना मजदुरमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एक हप्ताका लागि गलकोट नगरपालिकाका सबै नाका सिल गरेर लकडाउनमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको गलकोट नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बागलुङ जिल्लामा गठित ‘मानव अधिकार अवस्था अनुगमन’ समितिमा वैशाख ३१ गते इन्सेक बागलुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तलाई सदस्यका रूपमा मनोनित गरिएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पताललाई विस्तार गरी २ सय शैया थप्ने भएको छ । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालका संयोजक तथा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा वैशाख ३१ गते बसेको बैठकले २ सय शैया थप गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त अस्पतालमा हाल ३६ सामान्य शैया र आठ शैयाको आइसीयू मात्र रहेको छ । अहिले बुटवलको कोरोना अस्थायी अस्पतालमा रुपन्देही र कपिलवस्तुका ३६ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् ।
कपिलवस्तुमा वैशाख ३१ गते थप एक जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टी भएसँगै जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३० पुगेको छ । जिल्ला अस्पताल तौलिहवामा कार्यरत एक जना नर्समा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरू थप चिन्तित भएका छन् । कपिलवस्तु जिल्लालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । वैशाख ३१ गते आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएका सवारी साधन र औषधि पसलमात्र सञ्चालन भएका छन् । विजयनगर गाउँपालिकाले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका भारतदेखि आएका ३ सय ६५ जना नेपालीलाई गाउँपालिका भित्रका विभिन्न विद्यालयमा स्थापित क्वारेण्टाइनमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बर्दियाको गुलरिया नपा–१० पर्यागपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा रहेको क्वारेण्टाइनमा राखिएका १८ जनामध्ये आठ जना व्यक्ति शौचालय जाने भन्दै वैशाख ३१ गते बिहान ३ बजे भागेका छन् । यहाँ ४३ बेडको क्वारेण्टाइन छ । राजापुर नगपालिका–५ की कोरोना सङ्क्रमित बालिकालार्ई बाँकेको खजुरास्थित क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेशनमा राखिएको छ । बर्दियामा आइसोलेशन कक्ष नभएपछि बाँके वा दाङ लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । दाङका स्थानीय तहले विज्ञप्ति नै निकालेर बाहिरी जिल्लाका बिरामी आउन नदिने भनेपछि खजुरामा राखिएको हो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भैरहवामा ८ सय ३५ जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएकोमा ६ सय ३९ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र १ सय ९६ जनाको रिपोर्ट प्रकृयामा रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताउनुभयो । अर्घाखाँची, रुकुम पुर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठानलगायतका प्रदेश ५ का जिल्लाहरूमा सवारी साधनलाइ वैशाख ३१ गतेबाट आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा हुम्ला जिल्लाका पत्रकारहरूको जेठ १ गते जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा कोरोना परीक्षणको व्‍यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मुगु जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये छाँयानाथ रारा नगरपालिका, सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले लकडाउनको कारण जिल्ला बाहिर अलपत्र परेका स्थानीयबासीलाई उद्धार गरी ल्याएपछि गाउँघरमा कोरोना भाइरसको त्रास फैलिँदै जान थालेको र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा सङ्क्रमित खोज्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका चिकित्सकसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी गाँउगाँउमा जान थालेका छन् ।
रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकाले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई रोजागारी दिन नगरपालिकाले खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरिएको नगर प्रमुख विशाल शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका बैठकले वैशाख ३० गते कृषकलाई राहतस्वरूप बीउमा ८० प्रतिशत र मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका–१० सिसैया हरपालकी ३३ वर्षीया एक महिलाको काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ गएकी ती महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सङ्क्रमितको यात्रा विवरण खोज्न सुरु गरिएको छ ।
बर्दियाकी सङ्क्रमित बालिकाको सम्पर्कमा आएका कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–८ मजगाउँका ९६ र भजनी नगरपालिकाका पाँच जना गरी १ सय १ जनाको थ्रोट स्वाबको नमूना सङ्कलन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले बाँडेको राहतको चामल कुहिएको फेला परेपछि  चामल आपूर्तिकर्ता ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई २ लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ ।
अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका निवासी आरडिटी परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट आएकी ३९ वर्षीया महिला र पीसीआर रिपार्ट नेगेटिभ आएका दुई आफन्त ३७ र १९ वर्षीय पुरुषलाई सदरमुकामस्थित अछाम अस्पतालमा ल्याएर आइसोलेशन राखिएको थियो । तीनै जनाको वैशाख ३० गते स्वाब सङ्कलन गरी सुर्खेत पठाएकोमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी देवदत्त जोशीले जानकारी दिनु भयो । नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि तीनै जनालाई उपयुक्त उपचारपछि घर पठाइने बताइएको छ ।
कोरोनाको उपचारमा सहयोगका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुला जिल्लाका लागि पठाएका डाक्टरहरु वैशाख ३० गते फिर्ता भएको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डाक्टर गजेन्द्र दुवालले बताउनु भयो ।
महाकाली नदी ट्युबमार्फत तरेर अवैधरूपमा फर्कनेहरूका कारण कोरोनाको जोखिम हुन सक्ने भएकाले बैतडी जिल्लाको सीमासँग जोडिएका सबै पालिकाहरूले निगरानी समूह गठन गर्न थालेको बैतडी जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिनु भयो । त्यसैगरी, कोरोनाको उपचारमा सहयोग पु¥याउनका लागि सङ्घीय सरकारले बैतडी जिल्लामा वैशाख ७ गते पठाएका तीन जना डाक्टर २२ दिनपछि वैशाख ३० गते फिर्ता भएका छन् ।
भारतको टनकपुर क्वारेन्टाइनबाट निकालिएका डडेल्धुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाका २६ जना र आलिताल गाउँपालिकाका चार जना गरी ३० जना नागरिकको वैशाख ३० गते राति कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट नगरपालिकाका एम्बुलेन्स र टिपरमार्फत उद्धार गरी जोगबुढा ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुले जानकारी दिनु भयो ।